Shiinaha Elastic warshad daboolan dab-dabka | Weicheng
Magaca Badeecada Dahaadh dabacsan oo dabacsan
Faa'iidooyinka Badeecada Qeyb keli ah, oo leh dabacsanaan wanaagsan iyo isku dhejis, sameynta qaab isku xirnaan cufan ka dib gubashada dabka; si wax ku ool ah uga hortagi kartaa ololka iyo wareejinta kuleylka; ololka wax-qabad hufan, dhisme ku habboon
Baaxadda Codsiga 1. Xiritaanka dusha sare ee daaqadaha dabaqyada barokacay, derbiga oo wax lagu shubo, dhuumaha farsamada, tuubooyinka hawo-gelinta, tuubooyinka kuleylka kuleylka, iwm. isku xirka u dhexeeya dusha derbiga iyo sagxadda; 3. Soo-gaadhista Xadhkaha isku xidhka ka hooseeya heerkulka sare wuxuu leeyahay shuruudo adag oo loogu talagalay xiridda ka hortagga qiiqa; dahaadhka isku xidhka albaabka
ku xiridda shaabad isku xidhka albaabka oo leh shuruudo adag oo looga hortagayo qiiqa. Nooca balaadhinta ee dabka ka hortaga dabka, si loo helo saamaynta looga baahan yahay ka hortaga dabka, ku dabool dhumucda loo qoray si loo ogaado in shaabadu xidhiidh la leedahay dusha sare ee walxaha aasaasiga ah ee tubbada si loo helo xoogga xabagta ugu weyn. Mastarada xad-dhaafka ah, ka hor intaanay adkaan, waxaa lagu saari karaa biyo. Dahaadh dabacsan oo dabacsan, nadiifiya furitaanka, una diyaar garooba in la mariyo FS-I dusha wadajirka waa in laga saaraa qashinka daadsan, boodhka, wasakhda saliida, dhaxanta, wax, iwm, oo ha ahaado mid qallalan. Hal qayb, biyo-ku saleysan, acrylic acid dab-caddeyn dab-damis waa waxqabad sare iyo dabacsanaan antifungal shaabad. Waxay iska caabin kartaa heerkulka sare iyo cadaadiska sare. Waxay iska caabin kartaa heerkulka sare, heerkulka hoose, heer sare, dhexdhexaad, cadaadis hoose iyo cadaadis taban, iyo sidoo kale xawaare sare. Waxyaalaha keliya ee wax lagu xidho, oo aan xabagta lahayn, guduudka madow, madoowga wax lagu shubo, kuma adkaanayo heerkulka qolka isla markaana wuxuu hoos u dhigaa heerkulka sare Dareemka ololka ayaa ah nooc cusub oo ka mid ah maaddada dabka ka kooban. Sanadihii la soo dhaafay, si loo daboolo baahiyaha horumarinta dhismaha tiknoolajiyadda keydinta tamarta, oo ay weheliso faa'iidooyinka wax soo saarka gudaha iyo dibedda, waxaa laga sameeyaa maaddooyin moleculeed sare leh.
Guud ahaan, habka toosan ayaa loo adeegsadaa aqoonsiga, kaas oo loo qaybiyay FV-0, Fv-1 iyo Fv-2 iyadoo loo eegayo saameynta baaritaanka min sare ilaa hoose. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daboolida darbiga qaabdhismeedka dabka aan dabka lahayn, waxayna ubaahantahay awoodda ka-hortagga cillad ka-hortagga barokaca iyo ka hortagga dabka iyo qiiqa, Aaladda loo yaqaan "Acrylic acid" ee dabka lagu caddeeyo ee dabka ayaa ku habboon nooca qoriga. Nooca cabirka dabka ka hortaga dabka maaddada loo yaqaan 'fire-proof' waa nooc ka mid ah qalabka wax lagu xiro ee balaastigga ah ee polymer-ka lagu xiro, kaas oo leh waxqabadka labadaba ee xirashada iyo dab-ka-ilaalinta, waxayna ku habboon tahay dhismaha dabka-caddeynaya. Baaxadda dhismaha waxaa ka mid ah dhuumaha birta ah, tuubooyinka kululeynta kuleylka iyo kala-goysyada dhismaha. Xargaha dhejiska ah ee loo adeegsado albaabbada dabka-caddeeya ee ka hortagga dabka ka soo baxa, ma dabooli karaan shuruudaha looga baahan yahay dabka, Muuqaal ahaan iska hubi inaysan jirin dhibco yar yar oo cad oo ah waxyaabaha aan guban karin ee ku yaal xargaha caagga ah. Haddii aad isticmaasho lateriga si aad u shidid, maxaa intaas ka badan, si fudud ha u rakibin xariijimo shaabad leh, oo si ba'an u saameynaya ka hortagga dabka iyo ka go'idda qiiqa albaabbada dabka ee birta ah.
Xiga: Dahaarka dab-damiska xargaha